Raw Lapatinib (231277-92-2) HPLC8698% | AASraw
/ Products / Qaar kale waxay / Lapatinib
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ee Lapatinib (CAS 231277-92-2), iyada oo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Budada Lapatinib waa daawada ka hortagga kansarku soo saarto GlaxoSmithKline (GSK) sida daweyn loogu talagalay kansarka adag sida naasaha iyo kansarka sanbabada. Waxaa la ansixiyay FDA on March 13, 2007, si loogu isticmaalo bukaanka qaba kansarka naasaha ee heer sare ah ee lala xiriiriyo daaweynta kiimikada 'Capecitabine'. Lapatinib waa nooc xayawaan ah oo kobcinaya cirbadda qofka 2 (HER2 / ERBB2) iyo daaweeye kobcinta caarada epidermal (HER1 / EGFR / ERBB1) tyrosine kinase inhibitor. Waxay ku xidhan tahay xayeysiinta fosforyaalka ee ka hortagga ah si looga hortago xanuunka 'receptor autophosphorylation' marka la isku xiro ligand.
I.Lapatinib Calaamadaha aasaasiga ah:
Miisaankani waa: 581.0575432
Dhibcaha Biyaha: 137-139 ° C
II. Lapatinib (231277-92-2) isticmaalka wareegga steroids
Lapatinib (CAS 231277-92-2), magaca ganacsiga waa Tykerb, Tyver.
2. Isticmaalka Lapatinib:
1) Lapitinib waa kaniin loo qaado afka.
2) Xabbaduhu waxay ku yimaadaan xaddiga qiyaasta 1, 250mg.
3) Qaado lapitinib sida ugu dhakhsaha badan sida dhakhtarkaagu kuu sheegay.
4) Lapitinib waa in la qaadaa ugu yaraan hal saac ka hor, ama ugu yaraan hal saac kadib cuntada (qaadashada qiyaasta isku mar maalin kasta, qaybinta qiyaasaha lama talinayo).
5) Ha cunin ama ha cabin waxyaabaha alaabta cuntada lagu rusheeyo iyadoo la qaadanayo Lapatinib (231277-92-2).
6) Haddii aad seegto qiyaasta lapitinib, qaado sida ugu dhakhsaha badan marka aad xasuusato maalintaas. Haddii aad maalin ka maqnayd, ha laba jibaarin qiyaastaada maalinta xigta. Kaliya ka boodi qiyaasta la seegay. Bixiyahaaga daryeelka caafimaad haddii aadan hubin waxa la sameynayo.
7) Dhakhtarkaaga ayaa laga yaabaa inuu wax ka beddelo qiyaastaada lapatinib iyadoo ku xiran sida aad u dulqaadaneyso daaweynta.
3. Digniin ku saabsan Lapatinib
Lapatinib waxay keeni kartaa dhaawac beerka ah oo noqon kara mid daran ama nafta halis galinaya. Dhibaatada Beerta waxay dhici kartaa sida ugu dhaqsaha badan dhawr maalmood ama waqti dambe bilo ka dib bilawga daaweynta Lapatinib (CAS 231277-92-2). U sheeg dhakhtarkaaga haddii aad qabto ama uu ku dhacay cudurka beerka. Haddii aad dareento mid ka mid ah calaamadaha soo socda, wac dhakhtarkaaga isla markiiba: cuncun, maqaarka maqaarka ama indhaha, kaadida madow, xanuunka qaybta sare ee caloosha, dhiigbax aan caadi ahayn ama nabar, ama saxaro ama madow.
Dhammaan ballammada dhakhtarkaaga iyo sheybaarka. Dhakhtarkaagu wuxuu ku amri doonaa tijaabooyinka shaybaarka qaarkood kahor iyo inta lagu jiro muddada daaweyntaada si loo arko in beerkaagu uusan u dhaawacmin ama uu waxyeelo u gaystay lapatinib.
Kala hadal dhakhtarkaaga khatarta qaadashada lapatinib.
Lapatinib waa nooc ka mid ah daawooyinka kansarka lagu barto (daaweynta bayoolojiga) oo loo yaqaan 'kinase inhibitor' (TKI). Waa daaweyn la beegsaday oo loogu talagalay kansarrada leh qadar badan oo ah borotiin ah oo la yiraahdo HER2 (daaweeye hormarka epidermal growth factor 2).
Kansarka naasaha qaarkood waxay leeyihiin tiro badan oo HER2 ah. Waxaa loo yaqaan 'HER2 positivecancers'. HER2 waxay ka dhigaysaa unugyada kansarku inay koraan oo u qaybiyaan. Lapatinib (231277-92-2) ayaa xiran HER2 si ay unugyada u joojiyaan koraan ama u dhintaan.
IV. Sida Lapatinib uga iibsato AASraw?
Noqo kuwa ugu horreeya ee dib u eega "Lapatinib" Cancel reply
Nootropics budada (16)
Anterolics steroids (47)
Nandrolone budada budada (8)
Isticmaal lab ah (4)
Xabbad dufan leh (32)
Dawooyinka PCT (8)
Qaar kale waxay (16)
Otilia on Cetilistat (Foosto) budo ah
Alissa on Trenbolone Acetate (Trenbolone Acce) budada
Tabitha on Oxandrolone (Anavar) budada
Earle on Cetilistat (Foosto) budo ah
Arlie on Tadalafil (Cialis) budada
Lorenza on Daawada budada ah
Margery on Cetilistat (Foosto) budo ah
Patricia on Daawada budada ah
RAD140 (Testolone) budada
Oxandrolone (Anavar) budada
qiimeeyay 3.33 out of 5